Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyada Denmark oo Shir Qabsaday
Waxaa maalinimadii Axada ahayd taariikhduna kubeegnayd 19/05/2013, kadhacay xafiiska Jaaliyada Somalida Ogadenia ee caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen kulan heer saro ah ooy kasoo wada qaybgaleen Maamulka iyo Xubnaha Jaaliyada iyagoo lagu wada gorfeeyay warbixino xasaas ah oo kusaabsan guud ahaan Halganka Somalida Ogadenia gaar ahaan waxqabadka Jaaliyada Denmark.
Shirkan oo ahaa mid aad utayo wanaagsan kanasoo qayb galeen dhamaan hawl-wadeenka Jaaliyada iyo madax sare oo JWXO katirsan kuwasoo fadhigoodu yahay wadankan Denmark. Waxaa kamid ahaa masuuliinta JWXO ee madasha kulanka goob jooga ka,ahaa maanta Lataliyaha Gudoomiyaha JWXO General Cabdullahi Mukhtaar oo kulankan marti sharaf u,ahaa.
Wuxuu Generalku lawadaagay kasoo qaybgalayaasha shirka warbixino iyo xog xasaasi ah oo kusaabsan xaalada guud ee Halganka Somalida Ogadenia maanta uu kusuganyahay iyo qorsheyaasha lahigsanayo hirgalinteeda mustaqbalka dhaw Inshaa Allah. Warbixintan oo ahayd miday aad uxiisaynayeen hawl-wadeenka Jaaliyada iyo waliba masuuliinta JWXO ee kahawl gala wadankan Denmark. Iyadoo uu Generalku aad oogu nuux nuuxsaday isbadallada dag daga ah ee lafilayo inay qabsoomaan mustaqbalka dhaw haduu eebuhu yiraahdo.
Kadib warbixintii Genaral Cabdullahi Mukhtaar, waxay kaqaybgaleyaasha kulanka sihufan usoo bandhigeen dareenkooda iyo aragtidooda ku,aadan habsami usocodka hawlaha halganka Ogadenia oo maanta maraya heer ay kunaaloon karaan shacabka Somalida Ogadenia ee xorriyada, cadaalada iyo nabadgaliyada jecel.
Dhanka kale wuxuu Generalku siwaafi ah ooga jawabaay dhamaan su,aalihii ay lawadaageen xubnihii iyo masuuliintii madashada shirka joogay. Kulankan oo kamid ahaa kulamada joogtada ah ee Jaaliyada Somalida Ogadenia ee Denmark ay sida joogtada ah uqabato yaa kusoo gaba gaboobay jawi aad uwanaagsan oo ujeedooyinkii iyo yoolkii laga lahaa sidii loogu talo galay loogu guulaystay.